မူလစာမျက်နှာ - Bhmed
အဆင့်မြင့် Biomolecular Ultrafiltrates
"ကြောင့်မတော်တဆမှု, ငါ့လက်မောင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်မီးရှို့ရာယဇ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါရီဖိုင်းအမာရွတ်များနှင့်အတူကျန်ရစ်သူတို့ကိုဖျောက်ရန်ရှည်လျားသောအင်္ကျီလက်ဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာငါ Bhmed ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကုသမှုလေးလအကြာ, ငါ့လက်မောင်းပေါ်အမာရွတ်များလုံးဝသွားပြီကြသည်! ရှည်လျားသောလက်မတ်မတ်မှနှုတ်ဆက်ပါတယ်! "
အသံထွက် Bhmed (#bhmed), "BH-Med," Laboratoire BiogénèseAppliquée (LBA) ကတစ်ဝန်ကြီးချုပ်ဆယ်လူလာကုထုံးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ 1981 ကတည်းကတည်ထောင် Laboratoire က de BiogénèseAppliquée (LBA) ဆယ်လူလာကုထုံး၏လယ်ပြင်တွင်အရှည်ဆုံး-ရပ်နေသောကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ်မှတ်ယူသည်။
FRESH Frozen အရေးပါသောဆဲလျ
NANOVITAL ဆဲလျ Extractive
"ငါ့ကိုငါ့အရေပြဿနာကိုကျော်လွှားကူညီမှုအတွက်, ဤမျှလောက် Bhmed ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါသည်ကိုယ်အရေပေါ်မှာပြင်းထန်ခြယ်ပစ္စည်းရှိသည်ဖို့အသုံးပြုငါကမပျောက်ကင်းရှိခဲ့သည်ထင်ခဲ့တယ်။ သို့သော်နေ့စဉ် NanoVital ဆဲလ် Extract များထဲမှဖလားကိုသုံးပြီးပြီးနောက်ကျွန်မခြယ်ပစ္စည်းကိုပေါ့စေကြ၏ခဲ့ကြောင်းသတိပြုမိ, ငါ့အသားအရေချောမွေ့ပြီးပိုတောက်ပကြည့်ရှုကြ၏။ အခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်, ငါ့ကိုလှည့်ပတ်ပင်ကလူငါကြည့်ရှုဘယ်လောက်အငယ်သတိထားမိဖို့စတင်ခဲ့ပြီတကား ယခုတွင်ငါသည်ငါ့အရေပြဿနာကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသထားပြီးအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏။ ငါ့ကိုလှည့်ပတ်လူတို့နှင့်အတူ NanoVital ဆဲလ် Extract ၏ထက်မြက်ဝေမျှဖို့ပျော်ရွှင်ထက်ပိုမိုဖြစ်ကြောင်းကို! "
ရေဗက္ကာကို C, 50
"နှစ်ပေါင်းငါရှိသောကြောင့်ငါ၏အကြောက်မက်ဘွယ်သောအရေပြားအနိမ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိခဲ့ပါတယ် - အဆီပြန်နဲ့ post-အပြစ်အနီရောင်အမာရွတ်များနှင့်အတူအထိခိုက်မခံ။ NanoVital ဆဲလ် Extract့2 ဖလားသုံးပြီးပြီးနောက်, ငါ့မျက်နှာပေါ်မှာ Post-အပြစ်အမာရွတ်များညှိုးနွမ်းစပြုလာသည်။ ဒါဟာအမှန်အံ့ဖွယ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးငါ့အဘို့အံ့ဘွယ်သောအမှုအလုပ်ဖြစ်တယ်! ကျနော်ကျိန်းသေမိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများမှ Bhmed အကြံပြုလိမ့်မယ်။ "
Angela T က, 38
ငါအာရှတိုက်မှာခရီးသွားလာနေစဉ် "ငါသည်သုံး NanoVital ဆဲလ် Extractive ပြန်လည်နုပျိုခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသိပ်နူးညံအသားအရေနှင့်ပိုမိုပေါ့ပါးအသက်အရွယ်အစက်အပြောက်နှင့်အတူပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ တဦးတည်းကိုအဓိကအံ့သြစရာငါ့အ hemifacial ချောင်းဆိုးပြဿနာအဖြေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ငါလုပ်ရိုးလုပ်စဉ် Botox ထိုးဆေးမပါဘဲအလုပ်လုပ်နိုင်ပါ၏။ ငါဒီထုတ်ကုန်မကြာမီအမေရိကန်ကိုလာမျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါအများကြီးမဟုတ်ဘဲ Botox ထက်သဘာဝဆဲလ်ပြန်လည်နုပျိုခြင်းထုတ်ကုန်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ငါ့ကိုယ်သဘာဝကျကျအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသဘောကျတယ်။ "
မာရိသ, G, 52
ကျွန်မအသက်နှင့်အမျှ "ငါ့အခြယ်ပစ္စည်းကပိုပြင်းထန်ဖြစ်လာခဲ့သည်နဲ့ကျွန်မမတိုင်မီကြိုးစားခဲ့ဖူးသောထုတ်ကုန်များအဘယ်သူအားမျှငါ၏အပြဿနာဖြေရှင်းကူညီနိုင်ဘူး။ သို့သော် NanoVital ဆဲလ် Extract ့တဦးတည်းဖလားကိုသုံးပြီးပြီးနောက်ကျွန်မခြယ်ပစ္စည်းကိုပေါ့စေကြ၏ခဲ့ကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ငါကအမှန်တကယ်ငါ့အအရောင်ချယ်ပြဿနာဖြေရှင်းကြောင့်ငါ Bhmed တွေ့ရှိခဲ့ဝမ်းသာပါတယ်။ "
"ငါသည်ခြယ်ပစ္စည်းများနှင့်ပွင့်လင်းပေါက်နှင့်အတူရုန်းကန်လေ့ရှိတယ်။ NanoVital ဆဲလ် Extract များထဲမှဖလားကိုသုံးပြီးပြီးနောက်, ငါသည်ကိုယ်အရေပေါ်မှာခြယ်ပစ္စည်းများစွာသောလျှော့ချရေးခံစားခဲ့ရသညျ။ ဒါကအားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အကြှနျုပျ၏အပေါက်တင်းကျပ်နှင့်ငါ့ခြုံငုံအသားအရေအသားအရေသိသိသာသာတိုးတက်! ငါကလူတိုင်းကိုသို့အရောင်နှင့်လူငယ်များထိုးသွင်းနိုင်ပါတယ်ယုံကြည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်ကျိန်းသေငါ့မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများမှဒီထုတ်ကုန်အကြံပြုမည်! "
မစ္စဂျေ Cheng, 50
Bhmed ဖြစ်ပါသည် ပရီးမီးယားလိဂ်ဆယ်လူလာကုထုံးကမ္ဘာပေါ်မှာ Anti-အိုမင်းအမှတ်တံဆိပ်။